पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले खुलाए कमल थापालाई हराउनुको कारण ! के भने पूर्वराजाले ? - Compaq News
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले खुलाए कमल थापालाई हराउनुको कारण ! के भने पूर्वराजाले ?
कमल थापा हार्नुको रहस्य खुलेको छ । पञ्चायत समर्थकले बहुदलमा जन्माएर दरबारको छत्रछायामा हुर्किएको दल हो- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी।
त्यसमध्ये एक थिए – कमल थापा। थापाले आफूलाई छोड्न लागेपछि चन्दले एउटा टिप्पणी गरे, जुन नेपाली राजनीतिमा बलियो विम्ब बनेर बस्यो। चन्दले त्यसलाई ‘मुसा प्रवृत्ति’ भने र त्यसको व्याख्या गरे।
हुन पनि उनी विचार मिल्ने र नमिल्ने दुबै राजनीतिक शक्तिसँग सत्ताका लागि उदारपूर्वक समीकरण गर्छन्। मन्त्री हुनको लागि गरिने त्यस्ता समीकरणले राप्रपाले बोक्ने राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा कमजोर बन्दै गयो। एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा मिलेर २०७२ मा संविधान जारी भएपछि सरकार बनाए। त्यो गठबन्धनले विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा अघि बढायो। राजतन्त्रका हिमायती थापा गणतन्त्रको ‘सिम्बोल’का रूपमा रहने राष्ट्रपति पदमा भण्डारीलाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको समर्थक बने। यस्ता कतिपय घटनाले कमल थापालाई राजतन्त्र वा हिन्दु राज्य हैन, सत्ता चाहिएको हो भन्ने मत बलियो बन्दै गयो।